12V DC 110 / 240V AC LED nalalka iftiinka iftiinka iftiinka LED,Muraayada Iftiinka Led,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shiinaha 12V DC 110 / 240V AC LED nalalka iftiinka iftiinka iftiinka LED, Soo saaraha & Qalabka
12V DC 110 / 240V AC LED nalalka iftiinka iftiinka iftiinka LED. Waxaan leenahay xulashada ugu weyn ee websaydhka ah ee xoogga yar iyo korodh sarreeya iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka gudaha iyo dibedda. Codadka ayaa lagu magacaabaa iftiin yar oo neef ah ama iftiin adag, led neon ah. Waxaan soo saarnaa noocyo kala duwan oo CE ah oo ku yaal dhammaan heerarka Kelvin ee macquulka ah iyo sidoo kale waxyaabo badan oo lumen soo saara si ay u kala doortaan. Isticmaal qalabkayaga tayada sarre ee sarreeya ee goobaha iftiinka gudaha iyo dibedda ee meelaha dheeraadka ah, dabeecada loo yaqaan 'eco-friendly' iyo 'customizable linearinable' loo baahan yahay. Dhammaan shayadaheena hoose ee Ribbon Rugbon Rakib-yada fudud ayaa lagu tijaabiyaa gacanta, lagu qiimeeyay 50,000 saacadood oo nolol ah, waxayna haystaan ​​damaanad 2 sano ah. Raadi doorashadeena RGB, iyo Hal Cinjab Midabkoodu hooseeyo ama na soo wac si aad u ogaatid su'aal kasta oo aad leedahay si aad u ogaato nooca laydhka iftiinka kuugu fiican yahay adiga kuu fiican. Isbedelada iftiinka leh iyo awoodda sare ee SMDs ayaa ogolaatay nalalka laydhka LED Isticmaalida codsiyada sida nalalka nalalka dhalaalaya, nalalka florescent iyo beddelka nalalka halogen, codsiyada nalalka aan tooska ahayn, Kormeerka Xawaarida Ultra inta lagu jiro geedi socodka wax soo saarka, dejinta naqshadeynta iyo dharka, iyo xitaa koritaanka dhirta.( 12V DC 110 / 240V AC LED nalalka iftiinka iftiinka iftiinka LED )
©2005-2018 Karnar Nala soo xiriir Khariidadda bogga Last modified: May 20 2019 03:59:37.